Isu tinogovana ruzivo rwedu uye ruzivo
Tine makore anopfuura 25 eruzivo rwehunyanzvi mukugadzira, dhizaini, kuvaka kana kugadziridza mapurojekiti ekutuhwina pasi rese. Tinogona kuve nemakesi muEurope, kuMiddle East, Asia neAfrica kune yako referensi.
Isu tinogara tichipa mhinduro dzakakodzera uye dzehupfumi zvichienderana nemamiriro enzvimbo.
Muchokwadi, ruzivo rwedu rwekuvaka dziva rekutuhwina pasirese rinotitendera kuti tipe zano pane zvinonyanya kuitika sarudzo. Mazano ekugadzira, kudhirowa uye ruzivo, mazano ehunyanzvi, ruzivo rwehunyanzvi ... Hazvina mhosva kuti mibvunzo ipi yaunayo, ndapota inzwa wakasununguka kutibata nesu.
Kwatiri, kuvakwa kwedziva rako rekushambira hakuzoregi mushure mekupedza master plan uye chikamu kana hydraulic diagram.
Mumakore makumi maviri nemashanu apfuura, takashanda munzvimbo dzakasiyana dzepasi, uye tekinoroji yenzvimbo dzakasiyana dzakasiyana. Takaunganidza ruzivo rwakakura mukubata nezvinetso zvakasiyana-siyana. Chiitiko ichi chinotigonesa kukupa zano pamusoro pemidziyo yakakodzera nhasi uye kukupa iwe nerubatsiro rwuri kure panguva yako yekuvaka dziva rekuvaka.
Zvinoenderana nemamiriro ekunze uye mirau yemuno, isu tinokurudzira iyo yakanakisa midziyo kwauri.
Dzimwe nguva zvakaoma kutsanangura zvinotarisirwa kwavari kune mhizha kana vavaki. Tinogona kukubatsira kana kukuitira.
Kutarisira nzvimbo yekuvaka
Iko hakuna chikonzero chekufamba nekuda kweizvi, sezvo mafoto nemavhidhiyo zvakaringana kuti isu tiratidze maitirwo ebasa uye nekukuyeuchidza kana zvichidikanwa.
Mazano edu achakubatsira kugadzirisa matambudziko akajairika anokonzerwa nezvikanganiso zvekugadzira kana kuchembera kwedziva.
Chirevo chedambudziko chiripo
Uyu mushumo unoratidza matambudziko aripo uye unopa mhinduro
Kuvaka kana kugadzirisa chirongwa chekutungamira
Kuvaka kana kugadziridza, isu tichakutungamira iwe kuti uwane yakanyanya kukodzera mhinduro.
Nhungamiro yechirongwa chekuvaka
Tinokuratidza nzira yekugadzirisa dambudziko racho.
Tichakuudza kuti ndeipi sarudzo yakanakira mamiriro ako.
Batsira kuita mhinduro yekuvaka dziva rako.
Public Swimming Pool Solution, Swimming Pool Project, Kunze Swimming Pool Solution, Swimming Pool Company, Swimming Pool Service, Infinity Edge Swimming Pool,